Tahaka izao No Anaovan’i Tsetsenia Ireo Mpampiditra Ho ISIS · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Septambra 2015 15:49 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Swahili, বাংলা, Español, polski, Français, عربي, Ελληνικά, English
Ny filoha Tsetsena, Ramzan Kadyrov, milalao amin'ny tigra ao amin'ny zaridainany manokana fiompiana biby . 27 May 2008. Sary avy amin'i Sergei L. Loiko. CC 2.0.
Sahirana miady hevitra ny amin'izay fandaharam-potoanan'i Rosia any Siria ny maro manerana izao tontolo izao noho ny fanitàran'i Mosko ny fisian'ny tafiny any amin'io firenena io. Mifanontany ry zareo raha toa ka mifanaraka amin'ny ady ataon'ny tandrefana amin'ny ISIS ny fanohanan'i Kremlin ny Filoha Bashar al-Assad, ao anatian'izany ny ezaka hanalàna an'i Assad eo amin'ny fitondrana. Raha toa ny sasany manontany ny amin'ny andraikitr'i Maosko handresena ny ISIS any Siria, dia tsy azo lavina ny ady ataon'i Rosia amin'ny vondrona mahery fihetsika any aminy. Tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, nampatsiahivin'i Ramzan Kadyrov, filohan'ny Repoblika Rosian'i Tsetsenia ny rehetra ny fisehon'ilay ady.
Nozarain'i Kadyrov tao amin'ny lahatsoratra ao amin'ny Vkontakte ( tambajotra sosialy amin'ny aterineto malaza indrindra any Rosia) ny lahatsary fohy iray mampiseho lehilahy tokony ho antsasakà-dozena mijoro milahatra miondrika amin-kenatra. Miteny tsetsena, maneho fihetsika tsy fankasitrahana ireo lehilahy i Kadyrov. Avy eo miresaka amin'ireo lehilahy ireo tamin-katezerana sy an-dranomaso ny lahy antitra iray narahinà vavy antitra iray. Manondro izy ireo. Mikiakiaka. Afeniny amin'ny tànany ny tavany.
Asehon'ilay lahatsary ireo lehilahy Tsetsena tratra mampiditra olona ho an'ny ISIS aty anaty tambajotra sosialy, ary ireo zokiolona nikiakiaka tamin'izy ireo dia fianakaviany sy ireo mpitarika ao amin'ny vondrom-piarahamonina any an-toerana. Heverin'i Kadyrov fa ny fianakaviany ihany no nitory ireo olona ireo tany amin'ny mpitandro filaminana.
Nihaona tamin'ny havan'ireo zatovolahy izay nampiroborobo ny ISIS tamin'ny tambajotra sosialy aho. Nasaiko ihany koa ireo silamo maro mpitondra fivavahana sy lehibenà vondrom-piarahamonina. Manana ray aman-dreny marina, tena olona mpivavaka izay manameloka tamin'ny fony ny fihetsiky ny zanany ireo lehilahy rehetra nania ireo. Naverimberin'ireo ray aman-dreny fa notezainy mba ho andrin'ny fianakaviana, ho tena Silamo marina, ary ho olom-pirenana tsara ny zanany lahy. Nolazainy ihany koa fa tsy ilainy ny zanaka lahy izay namadika ny fianakaviany, ny havany, ny olona akaiky azy, ny Silamo ary ny vahoakany.
Hita ho fohy fisainana sy tsy mijery lavitra ary nanandrana nandresy lahatra azy ireo ho any Siria ny iray amin'ireo zatovolahy ireo. Nandefa hafatra mandrahona ireo manampahefana sy ny fianakaviany izy.
Naveriko tamin'izy ireo indray : tsy misy toerana ho an'izay rehetra, eny fa na dia izay manopy maso amin'ny làlan'ny ISIS, aza aty Tsetsenia. Ny zava-dehibe indrindra dia ny fiarahan'ny ray aman-dreny miasa akaiky amin'ny mpitondra fivavahana sy ny mpitandro filaminana. Mampilaza avy hatrany ny mpitandro filaminana sy ny manampahefana ao an-toerana ry zareo amin'ny fihetsika mampiahiahy voalohany. Manampy amin'ny fisorohana ny voka-dratsy izany.
Fantatra tsara amin'ny fampiasàny haino aman-jery sosialy i Kadyrov. 1,2 tapitrisa ny isan'ny mpanjohy azy ao amin'ny Instagram ( afenina amin'ireo mpisera tsy namana ny kaontiny amin'izao fotoana izao) ary mpanara-dia 235.800 ny ao amin'ny Vkontakte. Tsy mahalana no iraketan'i Kadyrov an-tsary ireo lehilahy ampangaina ho silamo mahery fihetsika eo anatrehan'ny ray aman-dreniny sy ny lehiben'ny vondrom-piarahamonina. Tamin'ny Jona 2015, ohatra, novoriany tahaka izany teo anatrehan'ireo ray aman-dreny tezitra ireo zatovolahy efa ho am-polony voampanga ho nanery ireo vehivavy hanao burqas ( akanjo lava, misarona ny loha). ( Mazàna saron-doha no anaovan'ny vehivavy Tsetsena fa tsy voaly mandrakotra manontolo.)